अक्षय कुमारको फिल्म 'लक्ष्मी बम' को नाम फेरियो !
अक्षय कुमारको फिल्म ‘लक्ष्मी बम’ को नाम फेरियो !
प्रकाशित मिति - कार्तिक १४, २०७७ शुक्रबार
एजेन्सी । बलिउडका सुपर स्टार अक्षय कुमारको फिल्म लक्ष्मी बमको नामको विषयमा चलिरहेको विवादका बीच फिल्म निर्माण टिमले फिल्मको नाम फेरेको छ । अब यो फिल्मको नामा ‘लक्ष्मी’ राखिएको छ ।
यो फिल्म अर्को महिना ओटीटीमा रिलिज हुँदैछ । यो फिल्म विगत केही समयदेखि विवादमा छ । पहिले यो फिल्मलाई यसको नामका कारण ट्रोल गरिएको थियो । फिल्मको ट्रेलर रिलिज भएपछि यो फिल्ममाथि लभ जिहादलाई बढावा दिएको आरोप लाग्यो ।
फिल्म निर्माण टिमलाई श्रीराजपुत करणी सेनाले एक कानुनी नोटिस पनि पठाएको थियो । नोटिसमा फिल्मको नाम बदल्न माग गरिएको थियो । कानुनी नोटिसमा माता लक्ष्मीको नाम बमसँग जोडेर लक्ष्मीको अपमान गरिएको दावी गरिएको थियो ।
यो फिल्म २०११ मा आएको तमिल फिल्म कंचनाको रिमेक हो । फिल्मको नामको विषयमा निर्देशक राघव लरेन्सले भने ‘तमिल फिल्मको नाम फिल्मको मुख्य पात्र कंचनाको नामबाट राखिएको थियो । कंचनाको अर्थ सुन हुन्छ जसको माता लक्ष्मीसँग सीधा सम्बन्ध हुन्छ ।’